Fandraisana mpiasa sy fanofanana talenta - Anshun AKF Medical Technology Co., Ltd.
Fandraisana mpiasa sy fampiofanana talenta
Alefaso azafady ny tohinao any: Service @ runbo.net Manondro ny toerana:
Serivisy ho an'ny mpanjifa an-tserasera:
1. Mifantoka amin'ny fifandraisana an-tserasera amin'ny Internet mba hanamorana ny fifanarahana filaminana
2. Mampiasa fomba serivisy marobe hanompoana mivantana ireo mpampiasa ary hamahana ny olan'ny mpampiasa mampiasa vokatra.
3. Fanangonana ny filan'ny mpampiasa, fanampiana ny sampana tsirairay hanatsara ny asan'ny vokatra ary hamaranana ny fampiroboroboana ny tsena.
4. Fiatrehana ny fitarainan'ny mpanjifa sy ny fampitomboana ny tsy fitovian'ny mpanjifa.
5. Famakafakana ny angon-drakitra sy ny fanatsarana ny vahaolana miasa.
6. Manaiky ny rafitra fiovan'ny asa.
Ilaina amin'ny asa:
1. Ny hafainganam-pandehan'ny fanoratana dia tokony mihoatra ny teny 80 / min (fihainoana sy fanoratana)
2. Tia Internet ary manana fahalalana fototra momba ny fampiharana tambajotra.
3. diplaoman'ny oniversite na ambony, Solosaina, e-varotra sns no Aleo;
4. Tia mifandray amin'ny olona ary mitondra ny faneren'ny fifandraisana
5. Ny traikefa miasa mifandraika amin'ny Sales Sales dia aleony.
Fepetra ilaina amin'ny kalitao manokana:
1. Fahaizana mahay mandamina raharaha sy mianatra ny fahalalana vaovao;
2. Mahaiza mihaino, mahatakatra ary manana fahatsiarovan-tena amin'ny serivisy;
3. Mitandrina amin'ny antsipiriany, manana fahaizana matanjaka amin'ny fianarana samirery sy fifehezan-tena.
4. Manana toe-tsaina ekipa tsara, mampifanaraka ny tontolon'ny asa haingana;
5. Indostrian'ny serivisy tia sy ny fanekena ny sandan'ny serivisy.
1. Tompon'andraikitra amin'ny fanoratana karazana lahatsoratra, hevitra, fitaovana fanaovana dokambarotra ary famintinana ny tranonkala
2. Tompon'andraikitra amin'ny fanangonana fitaovana amin'ny tranokala, fanoratana sora-tanana ary
Ny fanitsiana an-tsoratra ny lahatsoratra, ny fanamafisana ary ny asa hafa:
3. Mandray anjara amin'ny fampandrosoana, fampiharana ary fanaraha-maso ireo paikady sy drafitra fampiroboroboana tranokala.
1. Ny lehibe indrindra amin'ny asa fanaovan-gazety, ny fifandraisana, ny sinoa, ny toekarena ary ny fitantanana, ary ny lalam-pampianarana dia tokony ho mari-pahaizana bakalorea na mihoatra.
2. Tompon'andraikitra amin'ny fanangonana fitaovana amin'ny tranokala, fanoratana sora-tanana ary fanitsiana lahatsoratra, fanamafisana sns, sns;
3. Fantatra amin'ny fomba matihanina, fisainana haingana, fahitana matanjaka, fahaizana manoratra mafy, fahaizana miteny fiteny mahery.
4. Afaka manoratra kopia fampiroboroboana tsy miankina,
miaraka amin'ny traikefa miasa amin'ny tranokala sy magazine.
Fiofanana momba ny mpiasa:
Araho ny torolàlana momba ny fampandrosoana stratejika an'ny orinasa AKF, Araho ny filan'ny fampandrosoana ny asa aman-draharaha, ny famakafakana ny elanelan'ny fahaiza-manao miaraka amin'ny fantsom-pivoarana ho an'ny mpiasa isan-karazany, ny fananganana rafi-panofanana ho an'ny mpiasa hanohanana haingana ny fampandrosoana ny orinasa, ary hanampiana ny fivelaran'ny asa aman-draharaha ataon'ny mpiasa amin'ny alàlan'ny varotra samihafa sy fiofanana mufti-dimensional.
Mamolavola fepetra momba ny fitantanana ho an'ny fanabeazana sy ny fiofanana momba ny mpiasa ary ny fanatanterahana fitantanana sy fanabeazana miompana amin'ny rafitra sy fenitra ary siantifika. Ampiharo amin'ny fomba hentitra ny fisintonana sy ny fampiasana ny volan'ny fiofanana araky ny fitsipika. Ampiasaina amin'ny fomba mandaitra sy feno ny vola fanampiana sy ny enti-miasa. Ny fanabeazana sy ny fampiofanana ny mpiasa dia raisina ho toy ny fitondran-tena amin'ny fampiasam-bola ataon'ny orinasa, ary ny orinasa dia novolena ho lasa fikambanana fianarana.
Manitatra ny fantsom-pampiofanana talenta hahafeno ny filan'ny fahalalana tsy tapaka ny talenta matihanina sy ara-teknika ary manome ny fanampiana ara-tsaina ho an'ny fampandrosoana ny fahafahan'ny mpiasa manatanteraka ny tanjon'ny fampandrosoana ny marika AKF.
Voarindra sy feno, mametraka adin-tsaina amin'ireo hevi-dehibe:
Manasongadina ny fambolena talenta avo lenta sy talenta vaovao. Ny toby fiofanana dia noraisina mba hamboly sy hanangana ekleona talenta anatiny misy antonony.
Famaranana amin'ny asa aman-draharaha, fifantohana amin'ny tena vokany, fiofanana momba ny mpiasa manakaiky ny paikadin'ny orinasa, fanamafisana ny fanohanan'ny fiofanana momba ny orinasan'ny orinasa, ny fampifangaroana ny teôria amin'ny fampiharana, ny fifantohana amin'ny fampiharana sy ny tena vokany.
Fananganana talenta voatokana: Fanofanana momba ny mpiasa feno
Fanofanana talenta matihanina: fitehirizana talenta fitantanana fototra
Votoatin'ny talen'ny fitantanana afovoany voatokana
Pool voatokana natokana ho an'ny fitantanana zokiolona
Làlana fampivoarana asa ara-teknika ：
Làlana fampandrosoana ny asa:
Mpivarotra ambony mpivarotra antonony mpivarotra tanora
Làlan'ny fampandrosoana ny asa fitantanana: filoha lefitra lefitra filoha lefitry ny foibe / Lehiben'ny Inspecteur Région / Mpitantana faritra Mpiandraikitra voatokana mpiandraikitra 60 volana 36 volana 24 volana 12 volana 0-6 volana